Foldable display ပုံစံမျိုးကို သူ့ရဲ့ Razr နောက်ဆုံး series အတွက်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Motorola – AsiaApps
Foldable display ပုံစံမျိုးကို သူ့ရဲ့ Razr နောက်ဆုံး series အတွက်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Motorola
August 23, 2018 August 23, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Foldable display ပုံစံမျိုးကို သူ့ရဲ့ Razr နောက်ဆုံး series အတွက်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Motorola
ထိပ်တန်း စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Huawei တို့ Samsung တို့လိုပဲ Motorola ဟာလည်း ခေါက်နိုင်/ဖြန့်နိုင်တဲ့ Foldable display အမျိုးအစားအတွက် ဒီဇိုင်းကာလရေးဆွဲပြီးထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ Motorola ရဲ့ Foldable display ဒီဇိုင်းအရသိရတာပါ။ Motorola ဟာ Foldable display ဒီဇိုင်းကိုတော့ Razr နောက်ဆုံးထွက်မယ့် series ဖြစ်တဲ့ Razr V4 အတွက်ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားတာပဲဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ Foldable display အတွက် Motorola ရေးဆွဲထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာကိုအောက်မှာတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပါဉီး။
Foldable display အတွက်ဒီဇိုင်းကတော့ ဂုံးကောင်အခွံ အဖွင့်/အပိတ် ပုံစံ Clam Shell ဒီဇိုင်းမျိုးလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Razr ရဲ့ပထမဉီးဆုံး series ဖြစ်တဲ့ Motorola Razr3ကီးပတ်ဖုန်းအမျိုးအစား အဖွင့်/အပိတ်ကိုမှ အခု Touch screen နဲ့ဖြန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Display တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးမှာဆိုတော့ လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ Motorola ရဲ့ Foldable display မှာဆိုရင် Folded mode နဲ့ Unfolded mode ဆိုပြီးနှစ်မျိုးအသုံးပြုသွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Folded mode ကတော့ အပိတ်အနေအထားကိုမှ Touch နှိပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Unfolded mode ကတော့ ဖြန့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ဖုန်းတွေအတိုင်းအသုံးပြုသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Mode နှစ်မျိုးကို ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင် အောက်က Motorola ရဲ့ Foldable display အတွက်ထွက်ရှိလာတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ရှိုးစေချင်ပါတယ်။
မရတော့ဘူး အရမ်းတွေဂေါ်နေပါပြီ ?) လက်ရှိမှာ Motorola ကိုယ်တိုင်က Razr V4 အတွက်တရားဝင်ကြေညာထားတာမျိုးမရှိသေးတာကြောင့် ဒီသတင်းက Rumor အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အခုလက်ရှိမှာ Razr V4 အတွက်ဖော်ပြပေးနိုင်တာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ?)
စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ အခုလို Foldable display ကို Touch Screen နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားလာနေပြီဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ User တွေအနေနဲ့လည်း မတူညီတဲ့ခံစားမှုအသစ်ကို မကြာတဲ့နှစ်အနည်းငယ်မှာ ခံစားနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ရှိမယ့်ရက်နဲ့ Spec တွေတရားဝင်ထွက်ရှိလာရင် ထပ်မံအသိပေးသွားဉီးမှာဖြစ်တာကြောင့် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Asiaapps ကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Article သီးသန့်ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Medium
Video တွေကို FaceBook Package နဲ့ကြည့်နိုင်မယ့် FMOVIE